corporatenepal.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्रीद्धारा शनिबार संसदमा प्रस्तुत चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतको अनु...
corporatenepal.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नीति तथा कार्यक्रम पारित, भोलि बजेट
काठमाडौं । संसदले आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । संसदमा उठेका प्रश्नहरुको शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर...
ओलीलाई देउवाको प्रतिप्रश्न– तीन बर्षअघि नै आफूले ईपीजी प्रतिवेदन किन नबुझ्या ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन ३ वर्षअघि नै तयार भएको भन्दै त्यतिबेला किन प्रतिवेदन नबुझेको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रति...
एकै पटक स्थानीय निर्वाचन गराएँ, छिटफुट घटना हुँदैमा धाँधली भन्न मिल्दैन्ः देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटफुट घटनालाई लिएर स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका...
corporatenepal.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद उपेन्द्र यादवले सरकारका कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन नसकेको बताएका छन् । शनिवार संसदमा उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा...
निजगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको निर्णय अविवेकीः पौडेल
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । उनले अदालतले गरेका कतिपय अवि...
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक्ने अदालतको फैसलाको स्वागत, यस्तो छ तर्क
काठमाडौं । टाँगिया सेवा समाज काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन दिएको निर्देशनको स्वागत गरेको छ । शनिबार कार्यक्रम गर्दै समाजले अदालतको पछिल्लो फैसल...
गठवन्धनको दुईतिहाई आउनेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी, फजुल खर्च नबढाउः अधिकारी
काठमाडौं । सरकारले आउँदो संसदीय निर्वाचनमा सत्ता गठवन्धनको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत आउने गरी ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भोलि जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक बर्षका लागि बज...
corporatenepal.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आफूले अघि बढाएको कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बिष्णु पौडेल रुष्ट
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले अघि बढाएको कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकोमा असन्तुष्टि ...
corporatenepal.com . १० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ओली अब एमालेबाट प्रधानमन्त्री नहुने प्रचण्डको ठोकुवा, ‘विगतमा पनि मैले बनाइदिएको हुँ’
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई अब एमालेबाट प्रधानमन्त्री हुन कठिन रहेको जिकिर गरेका छन् । शनिबार संसदमा उनले कुनै पार्टीसँग गठबन्ध...
corporatenepal.com . ११ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ओली पनि टाउको काटेर हत्यारोको रुपमा जेल प्रचण्डको भनाई, घृणा फैलाएको गुनासो
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मान्छेको टाउको काटेर हत्याराको रुपमा जेल गएको होइन भन्दा के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । शनिबार सं...
बालेन पुगे बन्चरेडाँडा, ‘स्थानीय माग सम्बोधन गरी फोहोर व्यवस्थापन नगरेसम्म खादा माला लगाउन्न’
नुवाकोट । बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै बन्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड साइटको अवलोकन गरेका छन् । उनले स्थानीयको गुनासो र मागहरु सुन्नुका साथै स्थानीयको माग सम्ब...
corporatenepal.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय नघटाउने फैसला गरेसँगै पत्नी हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन् । उनलाई बानेश्वरस्थित एक घरबाट पक्राउ गरिएको हो । स...
शनिबार आर्थिक सर्वेक्षण, आइतबार बजेट पेश हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ । बैठकमा आजका लागि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को अवरोधक...
निजगढ विमानस्थललाई मैले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा अघि बढाएको होः भट्टराई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पार्ने बताएका छन् । संसद...
बीओकेका ग्राहकलाई ह्यासट्याग फुडमा १० प्रतिशतसम्म
काठमाडौँ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र ह्यासट्याग फुड तथा बारबीच छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा बै...
‘नीति तथा कार्यक्रम के हो ? प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मेडिकल कलेज, मन्त्रीकोमा ठूला सडक हो ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरुको चुनावलक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको बताएका...
प्रभु बैंकले कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा आवद्ध कृषकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने
काठमाडौँ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम र प्रभु बैंकबीच मूल्य शृङ्खलामा आवद्ध कृषकहरुमा वित्तीय सेवा प्रवाहको लागि सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्...
काठमाडौँ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रिभर फल्स पावर लिमिटेडको शेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएको छ । शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि रिभर फल्स र प्रभु क्यापिटलबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा ...
काठमाडौंंवासीले बञ्चरेडाँडाको जग्गा किन्दिएर उचाल्दिएकाले स्थानीयले अवरोध गरेः झाँक्री
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने काम काठमाडौंवासीहरुले नै त्यहाँको जग्गा किनेर स्थानीयहरुलाई उचालेर गरेको तर्क गरेकी छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयो...
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई मेराकी होलिस्टीकको सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले बुढानिलकण्ठस्थित मेराकी होलिस्टीक वेलनेस रिट्रिटमा विशेष छुट पाउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । भिसा डेबिट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङका ग्राहकहरुलाई थप से...
कार, जीप र भ्यानको एलसी खोल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन नाडाकोे आग्रह
काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसियशन अफ नेपाल (नाडा) ले नेपालमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदान र यस व्यवसायमा देखा परेका समस्याहरुलाई केलाउदै ‘नाडा प्रस्पेक्टिभ अन करेन्ट सिनारियो–रेस्ट्रिक्शन अन इम्पो...
आफूले ल्याएको सिस्टमप्रति प्रचण्ड आफै असन्तुष्ट, नेपाली समाज विचलनतिर गएको तर्क
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताएका छन् । स्वर्गीय कृष्ण सेन इच्छुकको स्मृति दिवसमा शुक्रबार उनले नेपाली समाज बिचलनतिर गइरहेको बताएका ह...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई १५ लाखसम्म सजिलै कर्जा दिने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबीच तलबी खाता तथा पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रे...
लुम्बिनी । नेपाल आयल निगमको भलवाडीस्थित डिपोमा आज लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । बिहान ११ः४० बजेको तेल खनाउने क्रममा लु२ख २६५६ र लु२ख ५६८५ नम्बरको ट्याङ्करमा लागलागी भएको थियो । आगलागीबाट लु२ख २६...
तीनदिन बढेपछि घट्यो शेयर बजार, एक अर्ब २९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । लगातार बढिरहेको शेयर बजार साताको अन्तिम दिन आज भने घटेको छ । नेप्से ओरालो झरे पनि आज कारोबार रकम भने बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) का अनुसार आज बजार १५.८२ अंकले घटेको...
काठमाडौँ । रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले आन्तरिक बजारमा परेको चापलाई कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्...
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिद्वारा आर्थिक संकट समाधान गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको आह्वान
कोलम्बो । देश गम्भीर आर्थिक संघकबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले बिहीबार अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई श्रीलंकालाई औषधि, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न आह...
निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न उद्योग संगठन मोरङको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणिबाट स्तरोन्नती हुदा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका सम्वन्धमा उद्योग संगठन मोरङले स्व. महेन्द्र औद्योगिक अध्ययन केन्द्र, ईण्डष्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेज ...
रुस–युक्रेन युद्धले लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा बण्ड जारी गर्ने निफ्राको योजनामा ढिलाई
काठमाडौं । लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा बन्ड (ऋणपत्र) जारी गर्ने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को योजना रुस युक्रेन युद्धले प्रभावित भएको छ । युद्धका कारण रेट आकर्षक नभएकाले कम्पनीले बण्ड जारी गर्न...
मौद्रिक नीतिको समीक्षाः आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले अर्थतन्त्र थप चलायमान भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा...
मन्त्री बडू केपी ओलीमाथि खनिएपछि एमालेले गर्यो संसद अवरोध
काठमाडौं । संसदमा शुक्रबार बोल्ने क्रममा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीमाथि खनिन थालेपछि एमालेका साँसदहरु आक्रोसित हुँदै संसद अवर...
corporatenepal.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोको १५ करोड रुपियाँको आईपीओ जेठ २० गतेदेखि
काठमाडौँ । बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १५ करोड रुपियाँ बराबरको १५ लाख कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) जेठ २० गतेदेखि निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । कूल निष्काशन मध्ये ६० हजार कित्ता कर...
राष्ट्र बैंकले २२ करोड ३२ लाख मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ करोड ३२ लाख रुपियाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको विभिन्न कोषहरूमा रहेको उक्त रकम ३६६ दिनका लागि (२०७९ साल असार १ गतेदेखि २०८० साल जेठ ३२...
बालेनका दशौं हजार समर्थकहरु सडकमा निस्किएर मनाए खुशीयाली
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र शाह (बालेन)को दशौं हजार समर्थकहरु सडकमा निस्किएर बिहीबार खुशीयाली मनाएका छन् । जारी मतगणनामा विजयी भइसकेका बालेनले आफ्नो वि...
मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नचल्दा सहकारीहरु समस्यामाः मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीहरु मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् । काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित सुशासन प्रवर्द्धन र व्यवस...
काठमाडौं । श्रीमतीलाई अहिलेको स्थानीय निर्वाचनबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनाउने र अर्कोपल्ट राष्ट्रपति बनाउने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको सपना अधुरै हुने भएको छ । प्रकाशमान एक प...
निजगढ एयरपोर्टबारे छिमेकी वा दाताको चासोभन्दा पनि हाम्रा ‘पोलिटिसियन’को ‘पोजिशन’ के हो ?
डा. सूर्यराज आचार्य प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्वन्धी पूर्वाधार विकासको नितान्त प्राविधिक विषयमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले गलत गरेको छ । हाम्रो अहिलेको राज्य व्यवस्थामा यस्तो ह...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई बज रेस्टुरेन्टमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक र सुर्खेत स्थित बज रेस्टुरेन्ट प्रालिबीच ग्राहकहरुलाई छुट दिने समझदारी भएको छ । सो समझदारी पश्चात् बैंकका कार्डबाहकहरुले बज रेस्टुरेन्टका सेवा सुविधाहरुमा १० प्रतिशत छुट ...